Sasana Hitaythi | Mahasi Sasana Yeik Tha
Mahasi Meditation Centre was opened in 1950, with the Most Venerable Mahasi Sayadaw as its Principle Preceptor. The most Venerable Mahasi Sayadaw started the teaching of the Mahasi method of insight in 1947 and taught for 33 years until his death in August, 1982.
The Venerable Mahæsø Sayædaw was one of the very rare personalities in whom there wasabalanced and high development of both profound erudition linked withakeen intellect, and deep and advanced meditative experience.
(၂၂-၁၂-၂၀၁၅) မဟစည်ဓမ္မဗိမာန်တောကြီတွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော ဓမ္မကထိကအစည်းအဝေး
(၆၆) နှစ်မြောက် မဟာစည်သြ၀ါဒခံယူပူဇော်ပွဲကြီးသို့ကြွရောက်တော်မူလာကြသောဆရာတော်ကြီးများ
မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး သာသနာ့ရိပ်သာသို့ ကြွရောက်တော်မူလာပြီး (၁၇) နှစ်ခန့်အကြာတွင် ဆွမ်းကွမ်း ထောက်ပံ့ရေးအတွက် အထူးလိုအပ်လှသဖြင့် ဆရာတော်ဘုရားကြီ၏ သြ၀ါဒကို ခံယူ၍ ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ်၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ဟိတေသီအဖွဲကို (၅-၄-၆၆) နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
၁။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီး အဓွန့်ရှည်စွာ တည်တန့်ခိုင်မြဲရေး။
၂။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဟောကြားတော်မူခဲ့သော နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း ၀ိပဿနာအကျင့်မှန် တရားတို့ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ကာယကံမြောက် ချမ်းချမ်းသာသာ ကျင့်သုံးနိုင်ရေး။
၃။ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း ၀ိပဿနာအကျင့်မှန်တရားတို့ကို ကျင့်ကြံအားထုတ်ကြသော အရိယာလောင်း သူတော်ကောင်းများ ပွားများလာရေး။
၄။ လောကုတ္တရာရေးရာ အတ္တဟိတအကျိုးစီးပွား ပရဟိတ အကျိုးစီးပွားတို့ကို အလွယ်တကူရှာမှီးနိုင်ရေး။
၅။ ရန်ကုန်မြို့၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာကြီး စည်ပင်ပြန့်ပွား တိုးတတ်ရေးတို့ဖြစ်ပါသည်။
၁။ တရားအားထုတ်သော ယောဂီများအား ဆွမ်းအထောက်အပံ့ပေးခြင်း။
၂။ စနေနေ့တိုင်း ညစဉ်တရားပွဲကျင်းပခြင်း။
၃။ ယောဂီများကျန်းမာမှုအတွက် တိုင်းရင်းသမားတော်များဖြင့် အခမဲ့ဆေးကုသပေးခြင်း။
၄။ နှစ်စဉ် ထမနဲပွပြုလုပ်ခြင်း။
၆။ မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးသားပြုစုသော ကျမ်းစာအုပ်များရောင်းချဖြန့်ဖြူးခြင်း။
ဟိတေသီအဖွဲ့တွင် ရာသက်ပန်အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း (၂၅၀၀၀) ကျော်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး နာယကကြီးများ အဖွဲ့တွင် (၅) ဦး၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်အဖွဲ့တွင် (၁၀) ဦး၊ အလုပ်အမှုဆောင် (၇)ဦး၊ အမှုဆောင် (၁၄) ဦး၊ အရန်အမှူဆောင် (၁၃) ဦးဖြင့်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ဟိတေသီအဖွဲ့၏ရုံးသည် မဟာစည်ရိပ်သာအတွင်းတွင် တည်ရှိပြီး ဖုန်း - ၀၁- ၅၅၁၄၇၂ ဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။